Initiative Q ukubuyekeza – Ngakusasa enkulu lwemali digital? | Bonisa Top
Initiative Q ukubuyekeza – Ngakusasa enkulu lwemali digital?
Kuyini Initiative Q?
Initiative Q kuwumsebenzi kuhloswe ukwakha indlela yokukhokha engcono emhlabeni.
The difference between this and cryptocurrency projects is that Initiative Q has a strategy of targeting early adopters. Iqalile umkhankaso ke sika kusungulwe isimemo imodeli kuphela, futhi useqale siyalahla izindodla mfihlo ukuze Abokuqala zakuqala.
A max of 2 isigidintathu zemali okuzokhishwa, futhi inhloso uhlamvu olulodwa iyobe iwufanele $1. Enye yezinkinga eziyinhloko nge cryptocurrencies eziningi is kungcono ukungabi ukutholwa noma abasebenzisi. Initiative Q 1st Inhloso ukwakha mass esibucayi abasebenzisi bese ukwakha indlela yokukhokha engcono emhlabeni.
Initiative Q angase asebenzise cryptocurrency ubuchwepheshe kodwa lokhu okwamanje ukuba yanquma.
Ukusebenzisa ubuchwepheshe bamuva, inhloso ukudala best indlela yokukhokha, nge izimali ongaphakeme, izinkokhelo fast, kulula ukuyisebenzisa nokukhwabanisa khulula. Ukusebenzisa uhlelo lokusebenza scan into yakho nangaphandle ukuhamba, lena umbono wabo lula ukusetshenziswa. Ukukhwabanisa is uvinjelwa wasebenzisa zeminwe izinzwa, GPS, amakhamera imibhobho. Initiative Q futhi ufuna babe nekhono ukuhlanekezela ukuthengiselana, which Bitcoin does not have. Initiative Q uyophinde ufinyelele kubantu abakwazi ukuvula i-akhawunti ebhange.
Uma asebenzayo zokuxhumana ke ungase kakade uhlangabezana Initiative Q. Vele hlola Google Amathrendi igrafu elandelayo. Igama elithi 'Initiative Q’ usufikile elithi 'Ethereum’ ku-Google Trends.
Initiative Q ukubuyekeza – Ngakusasa iphrojekthi enkulu
Futhi, Initiative Q isimemezele nje banayo phezu 2 abayizigidi ezingu-ukubhaliswa. Akukubi inkampani ukuthi ubekhona zokuxhumana kusuka Meyi 2018.
Ukuze ubhalisele Initiative Q kufanele ube nesimemo kusuka umuntu. Bathumela isixhumanisi nge-imeyili noma zokuxhumana bese ubhalisa kusukela ukuthi isixhumanisi. Lapho lokubhalisa uthola Q4,945 ka mfihlo.
Nge kumasikhuphulane, the wamaduzane itshala imali abanye imali noma mfihlo, bese Ufika umvuzo ebhekisela abanye. I Abokuqala zakuqala uthole imivuzo kakhulu futhi inzuzo kakhulu kusukela uhlelo, kanye nezimali bezimali abasha kusatshalaliswa Abokuqala zakuqala. Abantu ezansi mbhoshongo cishe ukwenza ukulahlekelwa lokutshala izimali zabo ikakhulukazi uma iphrojekthi ehlala. Nge Initiative Q akukho utshalomali kokuqala, wena nje ubhalisele. Kuyinto mahhala futhi akukho utshalomali nhlobo eceliwe. Nge Initiative Q, wonke umuntu inzuzo njengoba akukho utshalomali kokuqala abathintekayo.
Ingabe sekwephuze kakhulu ukuba kunganikezwa ubhalisele?
Akukephuzi kakhulu ukuba ubhalisele, njengoba ungabona kusukela ku-Google Amathrendi igrafu. nje Lokhu sekuqalile ukuya phezulu, futhi Google Amathrendi kuphinde sezulu ukuthi udumo uzoqhubeka bakhuphuke ezinyangeni ezizayo. It is nje kusaqalwa futhi has a lukhule. Futhi lena akuyona ICO lapho une indlela yokutshala izimali zakho, kuba mahhala ukuze ubhalise, Ngakho-ke akukho lutho ukulahlekelwa.
Ingabe Initiative Q kube entweni enkulu elandelayo?
Kunzima ukutshela njengoba Initiative Q sekuqalile nje kungcono esigabeni sokuqala ngokuqongelela izindodla abasebenzisi. Kuyinto lapho sibona izigaba kamuva, lapho uhlelo lokukhokha nokuqalisa, ukuthi thina singahlulela uma le phrojekthi siyophumelela. It has ithimba nge izixhumanisi PayPal ngakho ukwakhiwa kwaleso sikhungo kubonakala eqinile
Enginakho izimemo okunqunyelwe, Ngakho it is 1st woza 1st ukukhonza isisekelo.
Mema Link: https://initiativeq.com/invite/SHLWWUw3X
Isixhumanisi ngeke ngokuzenzakalelayo ukukhubaza emva umeme quota kufinyelelwe.
Tags: Airdrop Airdrops Bitcoin Blockchain BlockchainTechnology Cryptocurrency
Imali Digital Freebies Kunconywa 1 amazwana BISH Jaishi
← Indlela usethe iptables ukubuyisela ngokuzenzakalela ku-qala kabusha e CentOS Linux? Kanjani ukulungisa Windows wasemuva firewall ngokwabelana ngemoto e Docker? →
Omunye wacabanga on "Initiative Q ukubuyekeza – Ngakusasa enkulu lwemali digital?”
Here is my invite link: https://initiativeq.com/invite/rWLhhh7pm
Joyina 56 ezinye ababhalisile